Apple waxay soo bandhigi kartaa iPad cusub oo leh awooda MacBook | Waxaan ka socdaa mac
Toddobaadka soo socda ayaa usbuuca muhiimka ah u ah innaga oo raacaya shirkadda leh tufaaxa la qaniinay waana haddii ay sameynayaan dhacdo bisha Oktoobar, waxay noqon doontaa daqiiqadda ay iyagu laftoodu waajib ku tahay inay sii daayaan casuumaadda munaasabada warbaahinta. Haddii aan falanqeyno sanadihii ugu dambeeyay taas waan arki karnaa Waxaan soo marnay sannado isweydaarsi ah oo bishii Oktoobar aynaan wax dhacdo ah soo marin.
Sannadkan waxaa jira warar xan ah oo badan oo xaqiijinaya in Apple uu qorsheeyey Muhiim cusub oo aan isku barano Wararka Mac iyo Ipadka. Mar labaad, waxaan ka shakisanahay in Apple ay soo bandhigi doonto laba shey oo si isku mid ah looga soo horjeedo isla dhacdada, laakiin markaan aragnay waxa dhacay waqti fog kahor wax dambe lama yaabani.
Processor Intel wuxuu sii wadaa hormarinta sidoo kale Apple sidoo kale tooda waana mida cusub ee iPhone XS waxaan awoodnay inaan la kulanno processor-ka A12 Bionic, processor oo leh xasilooni xeel dheer iyo neerfaha oo ka shaqeeya taasoo ka dhigaysa aaladda inay sameyn karto wax ka badan 5 bilyan oo hawlgal ah . Qaddarka hawlgallada waxaan filan karnaa in Apple ay diyaarinayso iPad cusub oo kacaan sameeya oo adeegsadayaal badan ka dhigaya inay doortaan iPad-ka oo aysan dooran MacBook.
Awoodda ay processor-rada cusub ee Apple la wadaagayaan luqadda cusub ee barnaamijyada ee Apple waxay u horseedi kartaa Apple ugu dambeyn inay go’aansato inay iska iloobaan processor-rada Intel si ay mar labaad u bilaabaan keli saliibiin. Sidaas Waxay xakamayn lahayd dhamaan kombuyuutarka kumana tiirsanaan laheyn shirkad kale inay soo bandhigto war.
Waxaas oo dhami waxay yiraahdeen, garan mayno hubaal haddii bisha Oktoobar aan heli doonno iPad cusub ama MacBook cusub oo leh astaamo ka wanaagsan. Waxa cad ayaa ah in labada qalabba ay la kulmayaan horumar ka dhigaya suuqa teknolojiyadda macaamiisha mar kale inuu waasho. Rajeynaya inaad iibsato Mac dhacdada Oktoobar?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Miyay noqon doontaa dhacdada Oktoobar ee Apple inay na barto iPad ama Macbook?
Isbeddelka qalinka Apple miyuu la jaan qaadayaa MacBookga?